Kooxaha Vidi FC Vs Chelsea oo barbaro ku kala baxay kulankooda ugu dambeeyay heerka group-yada ee tartanka Europa League – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Chelsea iyo Leicester City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Dajiye December 13, 2018
(Europa League) 13 Dis 2018. Kooxaha Vidi FC Vs Chelsea ayaa ku kala baxay barbaro 2-2 kulankooda ugu dambeeyay ay kaga soo xirteen Group L ee tartanka Europa League.
Qeybta koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1, kadib markii ay daqiiqada 30-aad uu Chelsea gool u dhaliyay Willian, laakiin Vidi FC ayaa heshay goolka barbaraha daqiiqadii 32-aad wuxuuna ahaa gool uu iska dhaliyay Ethan Ampadu.
Qeybta labaad marka leysku soo laabtay kooxda martida loo ahaa ee Vidi FC ayaa markale ciyaarta hogaanka u qabatay kadib markii uu daqiiqadii 56-aad uu gool u dhaliyay Loic Nego, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-1.
Kooxda martida ahayd ee Chelsea oo aan ka niyad jabin in ay dib ciyaarta ugu soo laabato ayaa heshay goolka barbaraha waxaana daqiiqadii 75-aad u dhaliyay Olivier Giroud, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2.
Ugu dambeyn kooxaha Vidi FC Vs Chelsea ayaa waxay kulankan ku kala baxeen barbaro 2-2, xili Chelsea ay u gudubtay wareega xiga ee tartanka Europa League.
“Waxaan soo dhaweyneynaa in Alvaro Murata uu yimaado kooxda Barcelona” - Jordi Alba